Etu aga - esi bulie Azụmaahịa Gị, Saịtị na Ngwa maka Apple Search | Martech Zone
Ozi banyere Apple ramping ya nyocha nyocha engine bụ ihe na-akpali akpali n'echiche m. M na-enwe olileanya mgbe niile na Microsoft nwere ike ịsọ mpi na Google… ma nwee nkụda mmụọ na Bing enwetaghị nnukwu mpi ihu. Site na ngwaike nke onwe ha na ihe nchọgharị agbakwunyere, ị ga-eche na ha nwere ike ijide òkè karịa ahịa. Amaghị m ihe kpatara na ha enweghị mana Google na-achịkwa ahịa ahụ na 92.27% òkè ahịaNa Bing nwere naanị 2.83%.
Adị m nwa agbọghọ Apple nwa afọ iri, n'ihi ezigbo enyi m zụtara m otu AppleTV mbụ. Mgbe ụlọ ọrụ sọftụwia m rụrụ ọrụ maka chọrọ nkuchi Apple, mụ (na enyi m Bill) ebe mmadụ abụọ mbụ nọ n'ụlọ ọrụ jiri laptops Mac. Agaghị m eleghachi anya azụ. Imirikiti ndị m maara na ịkatọ Apple ga-elekwasị anya na ngwaahịa a kapịrị ọnụ ma hapụ nnukwu foto… usoro okike Apple. Mgbe ị na-eji ọtụtụ ngwaahịa Apple n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ, ahụmịhe na-enweghị ntụpọ, njikọta, yana ojiji n'ofe ha enweghị atụ. Ma ọ bụghị ihe Google na Microsoft nwere ike ịsọ mpi.
Ikike Apple ime ka izi ezi nke nsonaazụ ọchụchọ m dabere na m iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, Mobile App, Safari, Apple Watch, MacBook Pro, na Siri ojiji - nke a jikọtara ya na otu akaụntụ Apple - enweghị atụ. Ọ bụ ezie na Google na-elekwasị anya na ntanetị na njirimara ogo… Apple nwere ike ijikọ otu data ahụ, mana jikọtara nsonaazụ ya na omume ndị ahịa ha iji mee ka ebumnuche dị mma na nkeonwe.
Ngwa Nchọgharị Apple Dị Ndụ
Ọ dị mkpa ikwu na igwe nchọta Apple abụghịzị asịrị. Site na mmelite ndị kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Apple, Apple Akara awade internet ọchụchọ na-egosipụta na weebụsaịtị ozugbo - na-enweghị iji ọ bụla mpụga search engine.
Apple kwenyesiri ike na ọ ghago ebe nrụọrụ weebụ laghachi na 2015. Ọ bụ ezie na enweghị nchọta ihe nchọgharị, Apple aghaghị ịmalite iwu ikpo okwu iji bulie Siri - onye inyeaka ya. Siri bụ akụkụ nke iOS, iPadOS, watchOS, macOS, na tvOS sistemụ arụmọrụ na-eji ajụjụ olu, njikwa mmegharị ahụ, nlebara anya, na njikwa onye ọrụ asụsụ iji zaa ajụjụ, nye ndụmọdụ, ma rụọ ọrụ.
Ike Siri bụ na ọ na-emegharị maka ojiji nke onye ọrụ ọ bụla, nyocha, na mmasị ya, yana iji ya na ojiji. Nsonaazụ ọ bụla e weghachitere na-ahaziri iche.
Nwere ike iji faịlụ Robots.txt kọwaa otu ị ga - esi chọọ Applebot iji tọọ saịtị gị:
Apple Search Elenye ọkwa
Enwere ihe ngosipụta nke Apple ebipụtara. Apple adiaha search engine ụkpụrụ na bipụtara a na-edochaghị anya nnyocha nke ya ogo ọcha na ya nkwado na peeji nke maka Applebot crawler:
Nkekọta onye ọrụ aka ya na rịzọlt nchọta
Ndabere na nkwekọ nke usoro ọchụchọ na isiokwu webpage na ọdịnaya
Ọnụọgụ na ogo nke njikọ ndị sitere na ibe ndị ọzọ na weebụ
Onye ọrụ akara ngosi dabere na ọnọdụ (ihe ruru data)
Njirimara imewe weebụ
Ntinye aka na njirimara na mpaghara ga-enye ọtụtụ ohere maka Apple. Ntinye aka nke Apple na nzuzo nke onye ọrụ ga-ahụ ọkwa nke njikọ aka nke na-emeghị ka ndị ọrụ ya nwee ahụ iru ala.
Web ka App njikarịcha
Ikekwe ohere kasịnụ ga-eso ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwa mkpanaka ma nwee ọnụnọ weebụ. Ngwaọrụ Apple iji jikọta weebụ na ngwa iOS dị mma. Enwere ụzọ ole na ole ụlọ ọrụ nwere ngwa iPhone nwere ike iji mee ihe a:
Universal njikọ. Jiri njikọ zuru ụwa ọnụ iji dochie atụmatụ URL omenala site na iji njikọ HTTP ma ọ bụ HTTPS. Njikọ njikọ ụwa niile na-arụ ọrụ maka ndị ọrụ niile: Ọ bụrụ na ndị ọrụ arụnyere ngwa gị, njikọ ahụ na-ewega ha na ngwa gị; ma ọ bụrụ na ha enweghị ngwa gị arụnyere, njikọ ahụ ga-emepe weebụsaịtị gị na Safari. Iji mụta otu esi eji njikọ ụwa niile, lee Kwado Njikọ Universal.
Ọkọlọtọ Smart App. Mgbe ndị ọrụ gara na weebụsaịtị gị na Safari, Smart Banner Banyere na-ahapụ ha ka imepe ngwa gị (ma ọ bụrụ na arụnyere ya) ma ọ bụ nweta ohere ibudata ngwa gị (ọ bụrụ na awụnyeghị ya). Iji mụtakwuo banyere Smart App Banners, lee Appskwalite Ngwa na Smart Banners.
Wepụ aka. Handoff na-ahapụ ndị ọrụ ka ịga n'ihu na-arụ ọrụ site n'otu ngwaọrụ gaa na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eme nchọgharị na weebụsaịtị na Mac ha, ha nwere ike ịwụli ozugbo na ngwa ala gị na iPad. Na iOS 9 na emesịa, Handoff gụnyere nkwado doro anya maka nyocha ngwa. Iji mụtakwuo banyere ịkwado Handoff, lee Handoff Mmemme Ntuziaka.
Apple anabatala ụkpụrụ nyocha ọchụchọ dị ka faịlụ robots.txt na tagging index. Ihe ka mkpa bụ na Apple ejirila Schema.org ọgaranya snippets ọkọlọtọ maka ịgbakwunye metadata na saịtị gị, gụnyere nchịkọta nchịkọta, onyinye, PriceRange, mmekọrịta mmekọrịta, nzukọ, Ntụziaka, SearchAction na ImageObject.
Nchọgharị ọchụchọ niile chọta, iri ari, na depụta ọdịnaya gị n'ụzọ yiri nke ahụ, yabụ iji usoro kachasị mma maka itinye usoro njikwa ọdịnaya gị ma ọ bụ ikpo okwu ecommerce dị oke mkpa. Na mgbakwunye, ịkọwapụta saịtị gị yana ngwa mkpanaka jikọtara ọnụ kwesịrị imeziwanye ike gị ịchọta ya na igwe nchọgharị Apple.
Debanye Azụmaahịa Gị na Apple Maps Jikọọ
Have nwere ebe mkpọsa ma ọ bụ ọfịs ebe ndị ahịa mpaghara chọrọ ịchọta gị? Ọ bụrụ na ịmee, jide n'aka ịdebanye aha maka Apple Maps Jikọọ iji nbanye Apple gị. Nke a anaghị etinye azụmahịa gị na Apple Map ma mee ka ụzọ dị mfe, ọ na-ejikọtakwa Siri. Ma, n'ezie, ị nwere ike ịgụnye ma ị nabatara ma ọ bụ na ị naghị anabata Apple Ṅaa.
Etu esi lelee saịtị gị na Apple
Apple na-enye a mfe ngwá ọrụ iji mata ma enwere ike ịdebanye aha na saịtị gị ma nwee mkpado ndị bụ isi maka nchọpụta. Maka saịtị m, ọ weghachitere aha, nkọwa, onyonyo, akara ngosi aka, oge mbipụta, na faịlụ robots.txt. N'ihi na enweghị m ngwa mkpanaaka, ọ laghachikwara na enweghị m ngwa ọ bụla metụtara:
Nyochaa saịtị gị na Apple
Ana m atụ anya na Apple na-enye njikwa njikwa maka azụmahịa iji soro ma bulie ọnụnọ ha na nsonaazụ ọchụchọ Apple. Ọ bụrụ na ha nwere ike ịnye ụfọdụ usoro arụmọrụ Siri Voice, ọ ga-aka mma.
Anaghị m ejide olile anya dịka Apple na-asọpụrụ nzuzo karịa Google… mana ngwa ọrụ ọ bụla iji nyere ụlọ ọrụ aka imeziwanye ọhụhụ ha ga-enwe ekele!
Tags: apụlapụl botapụl mapApple Maps jikọọapụl ụgwọapụl ịchọapụl ịchọ engineelekere igweapplebotapụlviosiphoneitunesmobile ngwaNjem Ileta Ụmụ Anụmanụnyocha olu